Buy Huawei Nova 2i Xiaomi Mi 5sHuawei GR5 2017Samsung Galaxy Note3(0Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
Huawei Nova 2i Xiaomi Mi 5sHuawei GR5 2017Samsung Galaxy Note 3
ရောင်းချသူ: Lu Thit
second ပေါက်ဈေးနဲ့ 10%,15% မျှသာခွာ၍ဝယ်ယူပေးနေပါသည်။
ဘူးပစ္စည်းစုံ Warranty ကျန်ရင်ဈေးပိုရမည်။Error/Cloneမယူပါ။
I Phone! Samsung! Xiaomi! Vivo! Oppo! Sony!
အစရှိသော ဖုန်းများကို မော်ဒယ်အနိမ့်အမြင့်မရွေး ဝယ်လိုပါသည်။
အလုံးသန့် ရှယ်လေးတွေ ရောင်းပေးဦးမယ်ခင်ဗျာ။ဦးရာလူစနစ်ပါ။
Huawei Nova 2i Black 99%new အသစ်တိုင်းသန့်
နောက်စတေကာမခွာရသေး Ram 4gb Rom 64gb!
ရှေ့ ကင်မရာ 2လုံး! နောက်ကင်မရာ 2လုံးနဲ့ စိတ်ကြိုက်ပဲဗျာ
Fingerprint ရှယ်သွက်။Face Lock လေးလည်းအလန်းစား။
Full Display ဆိုတော့ ပြည့်စုံပြီလေ။ဘူးပစ္စည်းအစုံအလင်။warranty(7) လကျော်ကျန်သေးတယ်။No Error!
Xiaomi Mi 5s Gold 99%new အလုံးသန့် အနာအဆာမရှိ
Ram 4gb! Rom 32gb! Global official အလုံး တ
Playstore အော်ပါပြီး Dual sim! Camera အလွင့်လေး
ရုပ်ထွက်စိုရွဲနေတာပဲ(Mi 5x ထက်သာတယ်).
Fingerprint Ok! Battery လည်း ရှယ်ခံပါတယ်။
Home Key က 3D Touch နဲ့ဆိုတော့ ဂေါ်တယ်။
လက်တင်သုံးရုံပဲ။No Error! No Damage!
(mi 5x ထက် သာပါတယ်/အသစ်ဈေး 3သ်ိန်းကျော်).
Huawei GR5 2017 Gray 98%new ဘောင်တချက်ထိ
Ram 3gb! Rom 32gb! Daul sim! 1 sim+sd card!
Dual Camera လေးဆိုတော့ potrait နဲ့ အလွင့်လေးနော်။
Battery လည်းအငြိမ်။Fingerprint အရမ်းသွက်။
Android(7.0)နဲ့ အမိုက်စားလေး သုံးရပါမည်။No Error!
Ph & Cover.
Samsung Galaxy Note3White 97%new အလုံးသန့်
Ram 3gb! Rom 32gb! 1 sim! vietnam made!
Camera အလန်းစားနဲ့ ရုပ်ထွက်ကာလာစိုရွဲနေရောပဲ။
Battery လည်းခံတယ်။ဘယ်လောက်သုံး၂ မရိုးသွားဘူး။
Ph Only. No Error!Lcd အရိပ်ထင်တာလုံးဝမရှိပါ။
ပုံများကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုလို့ပါက chatbox မှတဆင့်ပို့ပေးပါသည်။
နယ်ဖက်customers များလည်း နီးစပ်ရာကားဂိတ်များကတဆင့်ပို့ပါသည်။
အော်စီး errorကင်း သော ဖုန်းများသာရောင်းချပေးနေပါသည်။
Ph ; 09779785711(Yangon)
အမည်: Huawei Nova 2i Xiaomi Mi 5sHuawei GR5 2017Samsung Galaxy Note 3